GarsoorNews - CEELBUUR: Dowlad ma heline dadna ma waysay?
by Farah C/laahi | Monday, Jan 23, 2017 | 92 views
Axmed Siigaale (Garsoor Online) — Markaad si dhab ah ugu kuur gasho aadna wareysato dadka xog ogaalka u ah xaaladda ay ku sugan tahay Degmeda Ceelbuur waxa aad durbadiiba dareemeysaa xanuun, niyad-xumo iyo in la dayacay oo la hilmaamay Degmedaas.Ceelbuur waxa ay dhacdaa Bariga Gobolka Galuguud waana Magaalo taariikh iyo xadaarad facweyn leh kana mid ah Magaalooyinka ugu qaddiimisan wadankeena.
Sanado ka hor Ceelbuur waxa ay aheyd magaalo saxmad fiican leh Horumar wanagsanna ku tallaabsaneysay gaar ahaan dhanka Waxbarashada, Caafimaadka iyo adeegyada kale ee Bulshada.
Siddeed (8) Sano ka hor Magaalada Ceelbuur waxa ku yiil Iskuulo Waxbarasho oo waaweyn iyo kuleejo agoonta iyo danyarta ay u dhiseen Jaaliyado iyo sharikado Soomaaliyeed ee kasoo jeeda deegaankaa Waxaana wax ka baran jiray inka kabadan 4000 oo arday oo heerar kala duwan isugu jiray.
Waxaa kale oo jiray kobac mugleh oo laga dareemayay Dhismeyaasha magaalada iyo ganacsiga madaama Ceelbuur ay xudun u tahay deegaaanada bariga Gobolka Galuduud dhaca isla markana Bulsho fara badani ay ku nooleed.
Sidoo kale Degmeda Celbuur waxa ay aheyd Degmo wax soo saar leh dad badanna ay nolol maalmeedkooda kasoo saaran jireen maadaama Ceelbuur laga helo ama laga soo saari jiray dhaxa Burjukada oo siyaabo kala duwan loo isticmaalo.
Dhaawicii koowaad ee Degmedaas ay la kulantay ayaa ahaa Kooxda Alshabaab oo go’doomisay Magaalada kana dhigtay Magaalo aysan hayadaha iyo dadka Samafalka ka shaqeeya aysan tagi karin, iyagoo sidoo kale faragalin dadban ku sameeyeen Waxbarashadii ka socotay Degmeda ceelbuur iyo deegaanada u dhaw-dhaw.
Iyadoo marba marka ka dambeysa magaaladu ay la daalaa dhaceysay Culeyska iyo go’doominta kooxda shabaab ayaa mar qura waxaa damay iftiinkii iyo kobacii ka socday Magaalada kadib markii Ciidamado fara badan oo Itoobiyaan ah ay galeen Magaalada Ceelbuur.
Saddex (3) Sano ka hor ayay aheyd markii Ciidamo ka Socda itoobiya huwanna magaca amisom ay la wareegeen gacan ku heyntii Magaalada Ceelbuur iyaga oo aan dhanna u dhaafin waxaan wehlinayey Ciidamo aad u tira yar ee Dowladda Soomaaliya ka socday.
Galitaanka Ciidamadaasi waxa ay dhaxashay in dhammaan shacabkii ku noolaa Ceelbuur ay dibadda uga baxaan magaalada iyagoo ka baxsanayey Ciidamada itoobiya iyo Kooxda Alshabaab oo iyaguna ku amray Shabacabka in aysan magaalada ku harin dhowr qof oo isku dayay in ay guryahooda waardiyeystaana Shabaab ayaa gowracay.
Magaalada Celbuur Muddo 3sano ku dhaw ma jiro wax shacab ah oo ku nool gudaha Magaalada Waxaa haawanaya oo cidlo ah Jidadkii waaweynaa ee bartamaha Magaalada iyo Wadooyinkii Xaafadaha. Ganacsi, Waxbarasho iyo Caafimaad iyaga warkoodba ma jiro, kaliya Ciidamada Itoobiya ayaa Ku sugan Magaalada Wax ay ka sameeyaan Cidina xog kama heyso xittaa dowladda Dhexe.
Dad badan ayaa sheegaya in Ciidamada Itoobiya ay wehelinayaan Saraakiil Caddaan ah mana jirto cid xog dhab ah ka heysa waxa ay halkaa ka sameeyaan iyadoo sidoo kale usbuucii mar ama labo lagu arko Diyaarado kuwa qummaatiga u kaca oo ku dagaya Xarumaha Ciidama itoobiya ay ka deggan yihiin Ceelbuur.
Cidna kama qarsoona in aysan jirin Dowlad Soomaaliyeed ee Ceelbuur maanta u maqan ama wax u qabata, haddana waxaa is weydiin Mudan Miyeysan jirin dad waxgarad, Aqoon yahan, Siyaasi ama Ganacsade ka damqada oo xal u raadiya Ceelbuur.
Ugu Dambeytii Degmeda Ceelbuur waxa ay u baahan tahay Garasho, Gurmad iyo in maskax furan looga fekero sidii dib loogu soo nooleyn lahaa Qiyamkii Ceelbuur Iyadoo aan laga sugeyn dowlad ee Cidda laga sugayo ay tahay Dadkii deegaan ahaan ku abtirsan jiray.
W/Q: Axmed Siigaale
Puntland oo Ka Hor-timid in Xasan Sheekh uu caawiyo